भोली महिनाको अन्तिम दिन तपाईको कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् भोलीको राशिफल !
बैशाख ३०, २०७६ GA
भोलि मिति बिक्रम संवत २०७६ साल बैशाख महिनाको ३१ गते मंगलवार तद अनुसार सन् २०१९ मे १४ तारिख तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल !
साहित्य लेखनको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। सिर्जनात्मकताले भरिएको समय रहेको छ। अचानक मित्र भेट हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शत्रु परास्त गर्न सकिने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र खासै लाभप्रद देखिदैन। समग्रमा तपाईको लागि भोलिको दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
माताको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ। आर्थिक कारोवारको क्षेत्रमा सकेसम्म हात अघि नबढाउदा नै राम्रो हुने छ। मध्यान्ह पश्चातको समयमा भने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। बिद्यार्थी वर्गका लागि समय अनुकुल रहेको छ। सृजनात्मकतामा वृद्धि भएर जानेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ।
कार्यमा सफलता मिल्नाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। परिवारका साथमा अनावश्यक मनमुटाव हुन सक्नेछ। माताको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। भाग्योदयको सम्भावना रहेको छ।
दिर्घकालिन योजना बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। परिवारजनका साथमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्नेछ सावधान रहनुहोला। अपेक्षा गरेअनुरुप कार्यमा सफलता मिल्ने छैन। मध्यान्ह पछिको समयमा भने स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। दाजु भाईको सम्बन्धमा सुमधुरता छाउने छ।
दृढ बिश्वासका साथमा कार्य सम्पादन भएर जानेछ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ। सरकारी कार्यमा लाभ मिल्ने छ। परिवारका साथमा दिन सुखमय बित्ने देखिन्छ। आयको तुलनामा खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ।
मनमा नकारात्मक विचार आउनबाट बच्नु पर्नेछ। अनावश्यक वादविवादमा फस्ने सम्भावना रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा समय मध्यम खालको रहेको छ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,त,ति,तुव ,ते)
साथीभाईका साथमा कतै घुम्न जाने अवसर मिल्नेछ। सन्तान सुख मिल्नेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिने छ। खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। अनावश्यक वादविवादमा नाफस्दा नै राम्रो हुनेछ। आर्थिक कारोवार गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने छ।
आत्मविश्वासका साथमा कार्य गर्नाले हरेक कार्य सफलतापुर्वक सम्पादन भएर जानेछ। प्रतिभा देखाउने समय रहेको छ। नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ। पिताको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। मित्रवर्गद्वारा लाभ प्राप्त हुनेछ।
धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। घरमा मांगलिक कार्यको आयोजना हुने सम्भावना रहेको छ। सोचेअनुरुप हरेक कार्य सफलतापुर्वक सम्पादन भएर जानेछ। व्यवसायमा उच्च अधिकारीको सहयोग प्राप्त भएर जानेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको योग रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा खुसियाली छाउने छ।
स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिन सक्ने भएकाले बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने छ। मनमा नकारात्मक विचार आउन नदिनु होला। आकस्मिक खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छैन। समग्रमा मकर राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन मध्यम रहेको छ।
नयाँ कार्यको थालनी गर्नका लागि समय खासै अनुकुल रहेको छैन। सामाजिक क्षेत्रमा मान हानिको सम्भावना रहेको छ। शारीरिक स्फूर्तिमा कमि आउने छ। मानसिक बेचैनिको अवस्था सिर्जना भएर जानेछ। धर्मकर्म तथा आध्यात्ममा मन लगाउनाले बिशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउने छैन।
मानसिक उत्साहमा वृद्धि भएर जानेछ। निर्धारित समयमा कार्य सम्पादन भएर जाने छैन। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा खासै अनुकुल समय रहेको छैन। सरकारी कार्यमा लाभ मिल्ने छैन। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। दाम्पत्य सुखको अनुभूति हुनेछ।
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख ३०, २०७६१२:५३
भोली मोहिनी एकादशी : कुन राशिलाई कस्तो फल मिल्ला ? हेर्नुहोस् !